Ogaden News Agency (ONA) – Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) Bayaanka Shirwaynaha 3aad ee JWXO.
Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) Bayaanka Shirwaynaha 3aad ee JWXO.
Posted by Wariye Qaran	/ July 12, 2018
Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) Bayaanka Shirwaynaha 3aad ee JWXO
Casmara, 7 July 2018
Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya waxaa si guul ah ugu qabsoomay Shirwaynihii 3aad kaasoo lagu qabtay duleedka magaalada Casmara, intii u dhexaysay 01 – 07/07/2018. Shirwaynaha waxaa ka soo qayb galay xubaha Golaha Dhexe ee JWXO, ergo ka socota Ciidamada Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (CWXO), wakiillo ka socda qoysaskii naftood hurayaasha halganka xoraynta ku dhintay, ergooyin ka socda Jaaliyadaha Ogaadeenya, Ururka Haweenka Ogaadeenya, Ururka Culimada Ogaadeenya, Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeenya, wakiillo ka socda Odayaasha Ogaadeenya, marti ka socota Aqoonyahaniinta Ogaadeenya, iyo xubno ka socda siyaasiyiinta iyo Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa kaloo Shirwaynaha ka soo qayb galay wakiillo ka socda Isbahaysiga PAFD, oo JWXO ay xubin ka tahay, kuwaasoo kala ah OLF, ONLF, GPLM, BPLM. Sidoo kale waxaa Shirwaynaha goobjoog ka ahaa, oo khudbado ka soo jeediyay Ururka Cadaalada iyo Dimuqraadiyada Soomaaliyeed ee SRDA, Patriotic Ginbot 7 iyo Tigray People’s Democratic Movement (TPDM).
Shirwaynaha 3aad ee JWXO waxaa farriimo taageero iyo hambalyo isugu jira u soo diray ururro iyo dadyow kala duwan, kuwaasoo dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya u rajeeyay guul, nabagelyo iyo xorriyad taam ah. Dhinacyada farriimahan soo diray waxaa ka mid ahaa masuuliyiin ka tirsan dowlada Shirwaynaha martigelisay ee Eritrea, Ururka UNPO iyo ururrda xubnaha ka ah oo tiradoodu ay 48 gaadhayso, urur ay leeyihiin qowmiyada Basque ee dalka Spain oo SORTU lagu magacaabo, xubno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, xubno ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee dalka Jabuuti, xubno ka mid ah Guddigii Wadahadallada dhexdhexaadinayay ee Kenya, Ururka Conciliation Resource, Madaxwaynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Ururrada OPRO iyo OHRC, iyo aqoonyahanno ka tirsan Ogaden International Support Group.
Shirwaynaha 3aad ee JWXO wuxuu ku soo hagaagay xilli xasaasi ah oo qulquladaha, dagaallada iyo is-bedallada ka jira Ogaadeenya, Itoobiya iyo guud ahaanba gobolka Geeska Afrika ay wax badan ka beddalayaan siyaasada iyo hab-nololeedka bulsho ee dodyowga iyo dalalka ku yaalla goblka Geeska Afrika iyo waliba dalalka kale ee deriska la ah. Sidoo kale waxaa saamayn aan horay loo arag ku yeeshay gobolka Geeska Afrika, is-bedallada waawayn ee ka dhacay caalamka intiisa kale ee raadka ku yeeshay siyaasada, dhaqaalaha, bulshada iyo bii’ada intaba.
Shirwaynuhu, markii uu ka dooday geeddi-socodka halganka Ogaadeenya ee JWXO ay hormuudka ka tahay, isla markaana falanqeeyay arrimaha saamaynta ku leh halganka Ogaadeenya, siyaasadaha iyo istiratijiyadaha gumaysiga Itoobiya, iyo is-bedallada ka jira gobolka, caalamka iyo Itoobiya ee saamayn kara arrimaha Ogaadeenya.
Shirwaynuhu wuxuu maanka ku hayaa is-bedallada ka dhacay Itoobiya iyo tallaabooyinka uu qaaday ra’iisal wasaaraha cusub ee Itoobiya iyo is-bedallada siyaasadeed iyo amni ee arrintaasi horseeday ee saameeyay dalalka Eritereya, Soomaaliya, Jabuuti iyo Kenya.
Shirwaynuhu wuxuu aaminsan yahay in dalka iyo dadka Ogaadeenya si xoog ah loogu gacan geliyay gumaysiga Itoobiya qarnigii 19aad, iyadoo ay caawinayaan quwadihii waawaynaa ee gumaystayaasha ahaa, isla markaana aan waligeed si dhab ah arrintaas looga hadlin, gaar ahaan gumaysiga lagu hayo Ogaadeenya iyo qowmiyadaha kale ee Itoobiya ku hoos-dulman.
Wuxuu hoosta ka xarriiqayaa in dadka Soomaalida Ogaadeenya, oo dalkoodu uu ka mid yahay dalalka Afrika ugu qanisan, marka la eego Khayraadka Rabbaaniga ah (Dabiiciga ah) ee Eebe ku mannaystay, iyo inuu gaadhi karo horumar ka sarreeya ama la mid ah midka ay dalalka Gobolku gaadheen, ay xukuumadihii isaga dambeeyay xukunka gumaysiga Itoobiya si nidaamsan ugu diiddanaayeen inuu horumar sameeyo oo Khayraadkiisa ka faa’iidaysto.
Wuxuu mar kale ku celinayaa in dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ay xaq aan muran la gelin karin u leeyihiin inay si buuxda aayahooda uga tashadaan, arrintaasoo si cad ugu qeexan Sharciga Caalamiga ah iyo Dastuurka Itoobiya hadda u yaalla.
Wuxuu caddaynayaa in JWXO, oo cabbiraysa doonista shacbiga Soomaalida Ogaadeenya, ayna waligeed ka fuqaynin codsiga ay codsanayso in dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ay helaan xaqa ay u leeyihiin inay aayahooda si xor ah uga tashadaan, iyadoo loo marayo Afti xor ah oo cadaalad ku dhisan, taasoo ay goobjoog ka yihiin korjoogayaal ka socda ururro caalami ah ama dalal dhexdhexaad ah.
Wuxuu sii adkaynayaa in dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ay doorteen xukuumad ay ku qanacsan yihiin, iyagoo ka faa’iidaysanaya heshiiskii la dejiyay xilligii ku meelgaadhka ah ee saandkii 1991, hase yeeshee ay xukuumadii TPLF si sharci darro ah u weerartay xarumihii JWXO, isla markaana ay baabi’isay xukuumadii shacabku so doortay ee JWXO hormuudka ka ahayd.
Wuxuu si dhab ah u xaqiijinayaa in taliska TPLF ee food-saarka ka dhigtay Isbahaysiga magac u-yaalka ah ee EPRDF uu dhulka soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysiga 25-kii sano ee u dambeeyay ku maamulayay xaalad degdeg ah oon la shaacinin, isla markaana uu xasuuq ballaadhan ka gaystay Ogaadeenya, taasoo horseeday dhibaatooyin badan oo shacabka soo gaadha, kuwaasoo isugu jira dhimasho iyo bara-kicin qasab ah.
Wuxuu qirayaa in xukuumadihii isaga dambeeyay nidaamka gumaysiga Itoobiya ay dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ka galeen dambiyo dagaal iyo dambiyo bani’aadamnimada ka dhan ah, isla markaana ay si nidaamsan u xaqiri jireen xuquuqda dadka soomaaliyeed.
Wuxuu caddaynayaa in maamulka daba-dhilifka ah ee Ogaadeenya ka jira, ee TPLF ku shaqaysato, dambiile Cabdi Ileyna uu madaxda ka yahay, uu xasuuqyo waawayn u gaystay shacbiga Soomaalida Ogaadeenya, ilaa iyo haddana uu xasuuqaas ka wado dhammaanba gobollada Ogaadenya.
Wuxuu xoojinayaa siyaasadda JWXO ee ah in wadahadalka nabadeed uu ka mid yahay waddooyinka loo mari karo xal u-helidda dhibaatada Ogaadeenya.
Shirwaynuhu wuxuu sidoo kale garwaaqsaday in dadyowga ku hoos dulman gumaysiga Itoobiya ay guulo taariikhi ah gaadheen, ka dib markii ay sameeyeen kacdoon shacbi ah oo horseeday in dalka Itoobiya loo magacaabo ra’iisal wasaare cusub, kaasoo qaaday tallaabooyin dhabbaha u xaadhi kara in hannaan dimuqraadiyadeed uu ka curto dalka Itoobiya.
Shirwaynuhu, in kastoo uu qiray in ra’iisal wasaaha cusub ee Itoobiya uu qaaday tallaabooyin wax ku-ool noqon kara, haddana wuxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay is-beddal siyaasadeed oo dhab ah oo xal u noqon kara dhibaatooyinka Itoobiya ka jira, gaar ahaan kuwa haysta dadyowga Itoobiya ku hoos dulman.
Shirwaynuhu wuxuu sidoo kale soo dhaweeyay dhawaaqii ka soo yeedhay ra’iisal wasaaraha Itoobiya ee ahaa in xukuumaddiisu ay doonayso inay wadahadal la yeelato JWXO iyo inuu liiska argagixisada ka saaray JWXO iyo ururrada kale ee xornimo u-dagaallanka ah.
Shirwaynaha 3aad ee JWXO wuxuu dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya iyo CWXO ku bogaadiyay sida ay ugu dabar-adaygeen halganka gobannimo doonka ah ee lagaga soo horjeedo gumaysiga Itoobiya, wuxuuna ugu baaqay inay dadaalkooda iyo wax-qabadkooda sii kordhiyaan ilaa iyo inta laga gaadhayo hadafkii loo dagaallamayay ee ahaa in laga xoroobo gumaysiga Itoobiya.
Shirwaynuhu wuxuu madaxwaynaha dalka Eritereya Isaias Afwerke iyo shacabiga reer Eritereya uga mahadceliyay taageerada hagar la’aanta ahee ay la garab taagan yihiin shacbiga Soomaalida Ogaadeenya.
• Shirwaynuhu wuxuu dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ugu baaqay inay sii laban-laabaan dadaalkooda ku wajahan halganka Ogaadeenya
• Wuxuu si kale ugu baaqay inaysan oggolaanin dhibaatada uu gumaysigu ku hayo, isla markaana la mid noqdaan qowmiyadaha kale ee kacdoonka sameeyay ka gilgishay cadaadiska iyo cabdudhinta lagu hayo. Shirwaynuhu wuxuu dadwayna soomaaliyeed ugu baaqayaa inay ogaadaan inuu dhammaaday xiligii Cabdi Iley iyo saaxiibadii TPLF, lana soo gaadhay waqtigii ay runta u sheegi lahaayeen ee xuquuqdooda u istaagi lahaayeen
• Shirwaynuhu wuxuu ugu baaqay qowmiyadaha Soomaalida, Oromada iyo Canfarta inay gacmaha is-qabsadaan oo si wadajira ah uga horteegaan dagaallada ay TPLF ka oogayso xuduudaha u dhexeeya, ayna iska kaashadaan sidii ay uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka gumaysiga.
• Shiwaynuhu wuxuu xukuumadda gumaysiga Itoobiya ugu baaqayaa inay qaaddo tallaabooyin wax ku-ool ah oo horseedi kara in hubka laga dhigo ciidammada iyo malleeshiyooyinka ay TPLF u carbisay xasuuqa iyo cabudhinta shacabka, si loo soo afjaro xadgudubyada xuquuqul insaanka ee Ogaadeenya ka jira, isla markaana awoodda loogu celiyo dadka deegaanka iska leh.
• Shirwaynuhu wuxuu dadka Jamhuuriyada Soomaaliyeed ugu baaqay inay si buuxda u taageeraan halganka xaqa ah ee dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ay ugu jiraan sidii isaga xorayn lahaayeen gumaysiga Itoobiya.
• Shirwaynuhu wuxuu sidoo kale bulshada caalamka ugu baaqay inay gacan ka gaystaan xal u-helidda dhibaatooyinka ka jira Itoobiya, isla markaana ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa xal siyaasadeed oo horseeda in cid walba ay xaqeeda hesho, gaar ahaan dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya oo xuquuqdoodii iyo aayahoodiiba la duudsiyay.
Shirwaynuhu wuxuu si wayn u cambaareeyay dambiyada waawayn ee gumaysiga Itoobiya ka galayay dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya, tan iyo markii lagu wareejiyay dalka Ogaadenya.
Shirwaynuhu wuxuu sidoo kale cambaareeyay isku dhacyada iyo dagaallada ay TPLF ka dhex-hurinayso qowmiyadaha deriska ah ee kala duwan, si ay uga dhex faa’iidaysato, iyo inay wali sii isticmaalayso dambiile Cabdi Iley, si ay u hakiso is-bedallada ka socda Itoobiya, isla markaana ay colaad ugu abuurto dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya.
Casmara, 7 July 2018.